कसरी भयो फिनल्यान्डको ‘शिक्षा प्रणाली’ संसारकै उत्कृष्ट? हेर्नुहोस् १० कारण – Everest Dainik – News from Nepal
कसरी भयो फिनल्यान्डको ‘शिक्षा प्रणाली’ संसारकै उत्कृष्ट? हेर्नुहोस् १० कारण
काठमाडौं । फिनल्यान्डमा निजी विद्यालय छैनन् । निश्चित परीक्षा लिइँदैन । कुनै तनाव छैन । संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देशमा फिनल्यान्ड निरन्तर रूपमा शीर्ष स्थानमा पर्न सफल छ ।
विद्यार्थीले राम्रो गर्न नसक्दा धेरैजसो अवस्थामा शिक्षकलाई नै दोष दिइन्छ । तर फिनल्यान्डमा शिक्षकलाई यसो गर्न पाइँदैन । पासी साल्बर्ग, फिनिस शिक्षा मन्त्रालयका निर्देशक एवं ‘फिनिस लेसन्स ह्वाट क्यान द वल्र्ड लर्न फ्रम एजुकेसनल चेन्ज इन फिनल्यान्ड ?’ का लेखक शिक्षकको जवाफदेहिता बारे यसो भन्छन्ः
नेपालमा विद्यार्थीलाई परीक्षामा सबैलाई हराउँदै पहिलो नै हुनुपर्छ भन्दै प्रोत्साहन दिइन्छ । यहाँ परीक्षामार्फत विद्यार्थीहरू बीच एक–प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै गराइन्छ तर फिनल्यान्डमा त्यस्तो हुँदैन । साल्बर्गले सामुली प्यारोनेनको वाक्य सापटी लिँदै भन्छन् , ‘वास्तविक विजेताले प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् ।’
मूलभूत कुरालाई प्राथमिकता दिने:
कलेज डिग्रीपछि व्यावसायिक विकल्प पनि प्रदान गर्नु:
ट्याग्स: फिनल्यान्ड, शिक्षा प्रणाली